Power Station-Power Station-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valvụ bụ anyị ika)
Ọgbọ ike nke na-eji mgbatị ọkụ ọkụ na-agbasawanye na turbines ka bụ ụzọ kachasị gbasasịa na usoro ọdịnala iji mepụta isi ihe dị mkpa maka ọrụ ụlọ ọrụ na ngwa obodo.
Nkịtị ike ike si na mmanụ ụgbọala dị gburugburu 80% nke ngụkọta ike ọgbọ ma ga-adị elu maka afọ iri na-abịanụ.
Ọgbọ, ojiji nke biomasses ma ọ bụ ihe mkpofu ndị ọzọ n'ihi ọrụ mmadụ ka na-eto eto n'otu oge, mepee ọhụụ ọhụrụ maka valvụ nwere ike ịbịaru ọrụ HT, nsị nke apịtị & nnukwu ihe, gụnyere ngwa kpo oku mpaghara.
Ihe eji emeghari ohuru nke jiri otutu mgbanwe dika ugbo ala, geothermal nwere ike icho acho puru iche nke gunyere n’ime uzo Titan.
N'ime iri afọ gara aga, osisi ndị dị mkpa iji melite arụmọrụ ma belata ihe ọkụkụ na-eme ka mmụba nke nrụgide na nrụgide na-aga n'ihu.
Ya mere, valvụ, turbines, na nrụgide ndị ọzọ nwere akụkụ kwesịrị ịmalite site na iji ihe na usoro mmepụta nke na-eme ka iguzogide nsogbu ndị na-akpụ akpụ, meziwanye ike ntachi obi ma kwe nkwa ọrụ a pụrụ ịdabere na ya maka ndụ a tụrụ anya na ọnọdụ ọrụ ịma aka ọhụrụ.
Titan Valve, n'ihi usoro dị elu na usoro mmepụta, nwere ike ịnye ọtụtụ valvụ chọrọ maka ike ọgbọ (usoro mgbatị na mma, gụnyere ihe ndị nwere ume na ngwa ndị metụtara ya). Titan Valve nwere asambodo zuru oke nke asambodo ndị ọkachamara gụnyere fireproofing, obere leakage, SIL, wdg. Titan ahụmahụ na arụmọrụ na ike ụlọ ọrụ nwere ike izute ọtụtụ ahịa 'chọrọ.